लकडाउनमा वैदेशिक लगानी ८ अर्ब ३७, सबैभन्दा धेरै चीनबाट - Aarthiknews
लकडाउनमा वैदेशिक लगानी ८ अर्ब ३७, सबैभन्दा धेरै चीनबाट
काठमाडौं । नेपालमा बन्दाबन्दीको अवधिमा समेत वैदेशिक लगानीका परियोजना दर्ता हुने क्रम नरोकिएको पाइएको छ । चैत ११ गतेदेखि साउनको ५ गतेसम्म जारी बन्दाबन्दीको बीचमा नेपालमा स्थानीय एजेन्टमार्फत विभिन्न ५ देशका लगानीकर्ताले ५२ ओटा प्रोजेक्ट उद्योग विभागमा दर्ता गराएका छन् । यद्यपि यो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को भन्दा कम हो ।
विभागका अनुसार बन्दाबन्दीको यो अवधिमा चीन, भारत, सिंगापुर, मलेशिया, नेदरल्यान्डका परियोजनाको कुल लगानी रू. ८ अर्ब ३७ करोड रहेको छ । सरकारले चैतदेखि जारी गरेको बन्दाबन्दी साउन ६ गते मध्यरातबाट खुला गरेको थियो । यस अवधिमा कर्मचारीहरू आलोपालो गरी विभागका कामहरू सुचारू गरिएकाले ती देशका लगानीकर्ता नेपालमा नआए पनि नेपाली एजेन्टले परियोजना दर्ता गरेको विभागका सूचना अधिकारी विनोद खड्काले जानकारी दिए ।
चीनबाट सबैभन्दा बढी ४५ ओटा परियोजना दर्ता गराएको छ । तिनमा सेवामुलक र पर्यटनसम्बन्धी परियोजना अधिक छन् । चिनियाँ लगानीकर्ताको रोजाइमा त्यसपछि सूचना तथा प्रविधि, उत्पादनमूलक प्रोजेक्टहरू परेका छन् । यी परियोजनाको कुल लगानी रू. ७ अर्ब ५३ करोड रहेको छ । त्यसपछि परियोजना दर्तामा गर्नेमा भारतीय लगानीकर्ता रहेका छन् । उनीहरूको रोजाइ पनि सेवा र पर्यटन नै परेको छ ।
भारतीय लगानीकर्ताका जम्मा चारओटा परियोजना दर्ता भएका छन् । यी प्रोजेक्टको कुल लगानी रू. ७० करोड ७५ लाख रहेको छ । त्यसपछि मलेशिया, सिंगापुरबाट पर्यटन र सेवामा १/१ ओटा र नेदरल्यान्डबाट पनि सेवा र पर्यटन गरी दुईओटा परियोजना उद्योग विभागमा दर्ता गरिएका छन् ।
२०७५/७६ को यही अवधिमा १८ देशका लगानीकर्ताले नेपालमा १३८ ओटा परियोजना दर्ता गराएका थिए । उल्लिखित ५ देशसहित बंगलादेश, अस्ट्रेलिया, म्यानमार, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, टर्की, बेलायत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका जस्ता देशले परियोजना दर्ता गराएका थिए । साथै, यो अवधिमा १९ अर्ब ३६ करोड लगानीका परियोजना दर्ता गरिएका थिए ।